SomaliaReport: Madaxweynaha DKMG oo Booqday Xeryaha Barakacaya
By MOHAMED BEERDHIGE 01/12/2012
Madaxweyne Shariif ayaa u sheegay dadka abaaruhu saameeyeen inay ka xoroobi doonaan raashin la’aanta, halista fallaagada al-Shabaab, iyo inaan dawladiisu u dulqaadaneyn dhaca taageerada.
“Waxaan diyaar unahay inaan sida ugu wanaagsan u taakulayno dadka Badbaado iyo Rajo iyo qaranka guud ahaan. Waxaan fal kaqaadaynaa qofkasta oo isku daya inuu raashinka ka dhaco dadka barakacay,” waxaa yiri madaxweynaha isagoo tixraacayey dhacdooyinka askarta DKMG oo dhacaya raashinka gargaarka.
Madaxweyaha intaa ku sii daray in abuuray unug gaar ah oo ilaaliya xeryaha barakacayaasha kadib markii kufsiga iyo dhacu soo bateen labadii bilood ee ugu danbeeyey.
Aadam Cali oo 63 jir ah oo degan xerada Badbaado ayaa ku farxay booqashada madaxweynaha oo mustaqbalkooda u tafatiray.
“Madaxweyne Sheekh Shariif ayaa maanta nasoo booqday. Waxaan ku faraxnay inaan aragno una sheegno dhibtadayada. Wuxuu balan qaaday inuu nadifaacayo. Maanta waxaan helay raashin qalallan oo noo fiican, waxaana ku bedelaynaa badeecad kale ama waan haysanayn,” Aadam ayaa u sheegay Somalia Reort.
Tobanaan kun oo barakacayaal ah ayaa Muqdishu usoo kacay sanadkii lasoo dhaafay iyagoo kasoo cararay abaar iyo fallaagada al-Shabaab.
Xerada Badbaado ee barakacayaasha eek u taal degmada Dharkenley ee Muqdisho oo xerada ugu weyn ee caasimada ayna ku sugaan yihiin in kor udhaaftay 40,000 barakacayaal ah.
Wasiirka Difaaca DKMG Maxamed Macallin Nuur, Wasiir ku xigeenka wasaarada Xoolaha iyo Beeraha Xirsi Aadan Rooble, iyo saraakiil DKMG ayaa barakacayaalka ku booqday degmada Hodan ee Muqdisho oo u qaybiyey sonkor, bariis iyo saliid 180 qoys.